२०७६ पुष १९ गते २०:३१लाक्पा शेर्पा १९
काठमाडौं । ‘पिके’ ! नझुक्निुहोस्, यो प्रसंग आमिर खान स्टारर फिल्म ‘पिके’को होइन । न कुनै पियक्कडकै कथा हो । कुरा पिके डाँडाको हो, जो पदयात्राका लागि उपयुक्त गन्तव्य हुनसक्छ । पिके डाँडामा पदयात्रा गर्न सोलुखुम्बु टेक्नुपर्छ । सोलुखुम्बु आफैंमा सगरमाथाको जिल्ला । सगरमाथालाई नाङ्गो आँखाले हेर्न चाहनेहरुले पिके डाँडाकै पदमार्ग समात्न सक्छन् । यसका लागि ढापदेखि पिकेसम्म हिँड्नुपर्छ । यो पदयात्राका लागि तपाईंले पाँच दिनको समय छुट्याउनुपर्छ । ४ हजार ६५ मिटर उचाईमा छ, पिके डाँडा । पिके डाँडा पुगेपछि तपाईंको आँखा सामुन्ने देखापर्छ, सर्वोच्च शिखर सगरमाथा । यही डाँडामा उभिएर तपाईंले चारतर्फ नजर दौडाउनुभयो भने रहरलाग्दो हिमाली शृंखला देख्न सक्नुहुनेछ । पू्र्वको कन्चनजञ्घादेखि पश्चिमको धौलागिरिसम्म ।
आठहजार अग्ला हिमाल कञ्चनजंघा, मकालु, लोत्से, सगरमाथा, धौलागिरि लगाएत २ सय डिग्रीमा आँखा अगाडि हिमालहरु हेर्न सकिन्छ । अर्को रमाइलो दृश्य पनि यहाँबाट देख्न सकिन्छ, काठमाडौंदेखि लुक्लाका लागि उडेको हवाइजहाजको । यसका लागि तपाईंले आकाशतर्फ होइन, आफू उभिएको धरातलभन्दा तलतिर हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
पतलेदेखि पिकेसम्मको पदयात्रा व्युँतिएको छ -नाम्गेल जाङबु शेर्पा नगरप्रमुख, सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका सोलुखुम्बु भन्नसाथ सगरमाथाको जिल्ला भन्ने गर्दछन् । सगरमाथा देश-विदेशका पर्यटकलाई लोभ्याउने धरोहर हो । सबैलाई लाग्छ, जीवनमा एकपटक त सगरमाथा पुग्नैपर्छ, हेर्नैपर्छ । तर सगरमाथा पुग्नका लागि आधारशिविर पुग्नैपर्छ भन्ने छैन । सोलुखुम्बुको सोलु दुधकुण्ड नगरपालिकास्थित पातले र पिके डाँडासम्मको यात्रा गरे हुन्छ । तर, उचित प्रचारको अभावमा घुम्न चाहनेहरु यो ठाउँसम्म आइपुग्ने गरेका छैनन् । प्रचारसँगै यस ठाउँमा आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्नुपर्छ । हामीले सगरमाथा हेर्न मात्र होइन पदयात्रा गर्न चाहनेहरुका लागि पतालेदेखि पिके डाँडाहुँदै जुनवेसीबाट दुधकुण्डसम्मको पदमार्ग व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं । द्वन्द्वकालभन्दा अघि प्रख्यात रहेको यो पदमार्ग अहिले पुन व्युँतिएको छ । बिस्तारै चहल पहल बढ्न थालेको छ । सोलुखुम्बुको सोलु दुधकुण्ड नगरपालिकाको वडा नम्बर ३, ९ र १० पर्दछ पिके डाँडा क्षेत्र । अहिले नगरपालिकाले पदमार्गको बीच बीचमा चिया पसल, तथा पर्यटकहरुलाई चाहिने सूचना बोर्डहरु केही स्थानमा राखेका छौं भने केही स्थानमा राख्ने तयारी गरिरहेका छौं । पर्यटनसँग सरोकार राख्ने निकाय तथा प्रर्वद्धन गर्ने निकायले अलिकति सहयोग गर्नुभयो भने यो पदमार्गले सोलुखुम्बु क्षेत्रको मात्र नभएर राज्यको आर्थिक उन्नतिमा समेत सहयोग गर्नेछ ।
विविध: विचार/ब्लग साहित्य अन्तर्वार्ता रोचक विश्व राम्रो नेपाल
यो विषयमा यत्तिको गहल विश्लेषण गरेर लेखिएको लेख पहिलो पटक पढ्न पाइयो । विषय बुझ्न देखि विषय वरपरका सबै मुद्दा छर्लङ्ग । एउटा एकेडेमिसियनले लेखेको लेख निश्चय नै साधारण लेखनभन्दा फरक हुन्छ भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ । सबै सन्दर्भ सामग्रीको बाह्य लिंक जस्ताको तस्तै दिएर अनलाइन प्लाटफर्ममा प्रकाशन गर्नुको सुविधालाई यस लेखमा भरपूर प्रयोग गरिएको छ । विषय वस्तुको विश्लेषणात्मक गहिराइ त छ नै, आफ्ना तथ्यहरुलाई समर्थन गर्ने आधारहरु जस्ताको तस्तै राखेर प्रकाशन गरिएको यो लेखका लागि लेखक र अनलाइनखबर दुवैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु । आगामी दिनमा विद्वान मित्रहरुले लेखेका विचारमूलक लेखहरुमा त्यस्तो विचारको आधार के हो भन्ने पनि प्रष्ट खुलाइ लेख्न यो लेखले हामी सबैलाई उत्प्रेरणा देओस् ।
Jhon Doe २०७६ पुष ६ गते ९:३१
साच्चै राम्रो छ रारा १ बर्ष पहिले जाँदा सार्है रमणीय लाग्यो । फेरी जाँउ जाँउ लागेको छ ।
Mohammad Ali २०७६ पुष ६ गते ९:३१
फोटोहरु अत्यधिक एडिट भएझैं देखियो । भएकै हो या म गलत हो?
फोटाहरु हेर्दा चै जाऊ जाऊ लाग्ने खाले छ तर यो गुल्जार भनेको क्या हो मलाई मालुम भएन ।
रोजगार / बैँक / वित्त (25)
२०७६ पुष १९ गते २०:३१
समाज खेलकुद़़ जीवनशैली/स्वास्थ्य प्रवास अन्तराष्ट्रिय सूचना-प्रविधि